काठमाडौं । उपभोक्ताको सेवालाई मध्यनजर गर्दै प्रभु बैंक लिमिटेडले शाखा विस्तार गरिरहेको छ । संघीय संरचना बमोजिम गठित विभिन्न स्थानीय तहमा आफ्नाे शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याई बैंकको शाखा सञ्जाल विस्ता...
काठमाडौं । द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा संवाद टुटेको आठ वर्ष पछि नेपाल र भुटानबीच तेस्रो वाणिज्य वार्ता बिहीबार काठमाडौंमा शुरु भएको छ । वार्तामा दुई देशबीचको वाणिज्य व्यापार सहजीकरणमा छलफल केन्द्रित ...
संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुकाे तलब वृद्धि
काठमाडौं। सरकारले प्रधानन्यायाधीश सहित संवैधानिक निकायका पदाधीकारीहरुको तलब बढाएको छ । गत आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले न्याय क्षेत्र सहित संवैधानिक पदाधीकारीहरुको तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको ...
मालपोत कार्यालयमा प्रभु बैंक लि. को एक्स्टेन्सन काउण्टर सञ्चालन
काठमाडौं । प्रभु बैंकले आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा झापा जिल्लाको दमक नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालय र ईलाम मालपोत कार्यालयमा एक्स्टेन्सन काउण्टरहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । दमकस्थित मालपोत कार्याल...
काठमाडाै । प्रेमसागर फाउण्डेसन नेपालले संचालन गरेको जनभोजन(Food for People) लाई जनता बैंकबाट सस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत दुइ लाख सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ । जनभोजन कार्यक्रमको कार्यालय तसर...
१७ करोड रकम हिनामिना गरेको आरोपमा बैंक म्यानेजर पक्राउ
दाङ । बैंकको १७ करोड रकम हिनामिना गरेको आरोपमा देब विकाश बैंक नारायणपुर शाखाका म्यानेजर पक्राउ परेका छन् । बैंकको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उक्त बैंक शाखा म्यानेजर समिर बुढाथोकी गए राति पक्राउ परेका ...
मुलुकको व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने गरी बढेका बेला सुनमात्रै साढे ३४ अर्बको आयात भएको छ। उच्च व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्ने संकेत देखिएकाले विलासी वस्तु सुन आयात घटाउन सरकारले उपाय खोज्न...
तपाईंले बैंक खाता खोलेर लामो समय नचलाई बस्नुभएको त छैन ? त्यसो भए तत्काल नै गएर सक्रिय पार्नुहोस् । ६ महिनासम्म बैंक खातामार्फत कारोबार नगरेमा खाता निष्क्रिय हुने गर्दछ । निष्क्रिय खातामा अन्यत्रबाट प...
काठमाडौं । जनता बैंकबाट ‘गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धि दोस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन’लाई रु. २ लाख सहयोग प्रदान गरिएको छ । रातो बंगला फाउण्डेसनले शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा आगाम...
लगानी जोखिमको श्रेणीमा नेपालको सुधार
विश्व जोखिमको श्रेणीमा नेपालको अवस्था सुधारिएको छ । युरोमनी डटकमले १८६ राष्ट्रमा गरेको सर्वेक्षणले नेपालको अवस्था ५ अंकले सुधार भएर १४ स्थान अघि बढेपछि विश्वको लगानीयोग्य मुलुकको दाजँजोमा जोखिमको श्र...
सुनको मूल्य सगरमाथा चढ्दै !
काठमाडौं । हरेक दिन बढ्दै गइरहेको सुनको मूल्यले आज (बिहीबार) रेकर्ड तोडेको छ । आज(साउन २३) गते सुन प्रतितोला ७० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । हिजो(साउन २२ गते) ६९ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज तोल...
दोस्रो चौमासिक भित्र कार्यान्वयन नभए बजेट फिर्ता
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चौमासिक भित्र बजेट कार्यान्वयन नभए बजेट अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य रुपमा फिर्ता पठाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । मंगलबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा सरकारले पेश गरेको ‘आर्थिक ...
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले राजस्व प्रशासनमा गरेको सुधारका कारण धेरै नागरिक आयकरको दायरमा आउने अवस्था बनेको बताएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले आइतरबा आयोजना गरेको गोष्ठीमा अर्थमन्त्री खतिवडा...
काठमाडौं । हिन्दूहरुको महान चाड हरितालिका तीज नजिकिदै गर्दा सूनको मूल्य आकासिएको छ । हाल सम्मकै उच्च मूल्यमा सुनको कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायिले जनाएका छन । आइतबार सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै महँग...